China Nebulizer Mask fekitori uye vanotengesa | Bornsun
Oxygen mask isina okisijeni chubhu inovakwa kupa oxygen kana mamwe magasi kuvarwere, uye inofanira kushandiswa pamwe chete neoksijeni ichipa chubhu kazhinji. Iyo Oxygen mask inogadzirwa kubva kuPV mugiredhi rekurapa, inoumbwa nechiso mask chete.
Oxygen mask isina okisijeni chubhu yakavakirwa kupa oxygen kana mamwe magasi kuvarwere, uye inofanira kushandiswa pamwe chete neoksijeni ichipa chubhu kazhinji. Iyo Oxygen mask inogadzirwa kubva kuPV mugiredhi rekurapa, inoumbwa nechiso mask chete.
1.Iva huremu huremu, ivo vanonyanya kusununguka.
2.100% latex yemahara, DEHP yemahara inowanikwa yesarudzo.
3.Universal chinongedzo (luer kukiya) inowanikwa.
4.Smooth uye minhenga kumucheto kwevarwere kunyaradzwa uye kuderedza kushatirwa mapoinzi.
5.Sterilized neIO gasi kana zvichidiwa.
6.CE, ISO 13485 yakatenderwa.
1.Description: Disposable Nebulizer Mask
2.Material: Medical giredhi PVC
3.Components: Iine inogadziriswa yemhino clip, yakasungwa tambo, 2m Tubing
5.Chirongo: 6cc kana 10cc
6.Sterilization: EO gasi
7.Kurongedza: 1 pc / yega PE Bhegi, 100pcs / ctn
8.Quality Certification: CE, ISO 13485
9.Rwendo nguva: Mazuva makumi maviri nemashanu
10.Port: Shanghai kana Ningbo
11.Color: Transperant kana Green
1. Simbisa yakavhurika kurongedza mune yekudzivirira nguva yekushanda, bvisa okisijeni mask.
2. Vhara muromo wemurwere nemhino uye zvakagadziriswa, gadzirisa mask iri kadhi yemhino uye kuomarara, kuti isapinda oxygen muziso.
3. Iwo maoksijeni pombi majoini uye gasi yekufambisa kifaa chinongedzo
3.Size M, Pediatric Standard (6-12 makore) Zvishoma zvishoma masiki inopa chisimbiso chakachengeteka sezvo mwana anokura. Batsira kupa mishonga yeaerosol kuvana vane misikanzwa uye vanoramba kufema ma MDI.
4.Size L, Adult Standard (makore gumi nemaviri +) Mirayiridzo inokurudzira varwere kuti vachinjirwe kuchigadzirwa chemuromo nekukurumidza pavanokwanisa - kazhinji makore angangoita gumi nemaviri.
5.Size XL, Adult Elongated (makore gumi nemaviri +) Mirayiridzo inokurudzira varwere kuti vachinjirwe kuchigadzirwa chemuromo nekukurumidza pavanenge vachikwanisa - kazhinji makore angangoita gumi nemaviri.
Pashure: Nasal Mask Rudzi
Zvadaro: Nebulizer neMuromo Piece
Ruma Filter Rudzi
Nasal Mask Rudzi
Nebulizer neMuromo Piece